Redirection PHP (redirect header) - သိကောင်းစရာများ - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ » Redirection PHP (redirect header) - သိကောင်းစရာများ
Redirection PHP (redirect header) - သိကောင်းစရာများ။
တစ်နေ့တွင်မည်သည့် ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူတစ် ဦး မှ၎င်း၏ဖိုင်တစ်ဖိုင်တွင်မကိုက်ညီသောသို့မဟုတ်ဖိုင်သစ်ကိုပြုပြင်ရမည်ကိုသိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်၎င်း၏ site ရှိ link များကိုပြောင်းရန်လွယ်ကူလျှင်အခြား sites များရှိ external link များကိုပြောင်းရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရာများ၏စာမျက်နှာများကိုပြောင်းလဲသည့်အခါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အသုံးပြုသူများကိုလေဟာနယ်တစ်ခုအတွင်းသို့ပို့လွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးသည်မှာ၊ စာမျက်နှာ၏ရည်ညွှန်းမှုအားလုံးကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင်၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုရှိသည် - ဖိုင်များအားလုံးနေရာများပြောင်းလဲသွားလျှင်တောင်မှ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏အညွှန်း (နှင့် SEO) ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန် redirects ။
redirects သည် HTTP ခေါင်းစီးများဖြစ်သည်။ သို့သော် HTTP protocol အရ HTTP ခေါင်းစီးများသည်အခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာမဆိုမပို့မီပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ header function ကိုခေါ်ဆိုခြင်းမပြုမီမည်သည့်အက္ခရာမျှစာပို့ခြင်းကိုမပြုရ။
တနည်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက် header ကို () ဖြစ်ရမယ် မည်သည့် HTML ကုဒ်မတိုင်မီအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ - ခေါင်းစီးစာများပို့ပြီးကြောင်းအမှား။
page ည့်သည်ကိုအခြားစာမျက်နှာသို့လွှဲပြောင်းရန် (အထူးသဖြင့် conditional loop တွင်အသုံးဝင်သည်) အောက်ပါကုဒ်ကိုသာသုံးပါ။
<? php header ('Location: <ital> mapage.php </ ital>'); ?>
ဘယ်မှာ mypage.php သင် redirect ချင်သောစာမျက်နှာ၏လိပ်စာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤလိပ်စာသည်အကြွင်းမဲ့တည်ရှိနိုင်ပြီးပုံစံ၏သတ်မှတ်ချက်များလည်းရှိနိုင်သည်
ဆွေမျိုး / အကြွင်းမဲ့အာဏာလမ်းကြောင်းကို
အကောင်းဆုံးကတော့၊ အောက်ပါပုံစံရှိ server root (DOCUMENT_ROOT) မှအကြွင်းမဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
<? php header ('Location: <ital> /directory/mapage.php </ ital>'); ?>
target page သည်အခြား server တစ်ခုတွင်ရှိပါကအောက်ပါပုံစံ၏ URL အပြည့်အစုံကိုသင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
<? php header ('Location: <ital> http: </ ital> <ital> // www.commentcamarche.net/forum / </ ital>'); ?>
ယာယီ / အမြဲတမ်း redirects
ပုံမှန်အားဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြန်ညွှန်းအမျိုးအစားသည်ယာယီပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် SEO အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိကြပါ။
ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုစာမျက်နှာ A ကိုနေရာ B တွင်တွေ့ပြီဟုပြောလိုပါက၊ စာမျက်နှာ A နှင့်သက်ဆိုင်သော PHP ဖိုင်၏အစတွင်အောက်ပါကုဒ်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
<? php header ('Status: 301 အမြဲတမ်းရွေ့လျားနေတယ်'၊ false၊ 301); header ('တည်နေရာ: address_of_the_page_B'); ?>
<? header ('Status: 301 အမြဲတမ်းရွေ့လျား'၊ မှားယွင်းသော၊ 301); header ('Location: / contents / 748- ပရင်တာ'); ထွက်ပေါက် (); ?>
ဒါကြောင့်အပေါ်က link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်၊ စာမျက်နှာ
ထို့အပြင်၎င်းသည်ထာဝရလွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည် (Status: 301 အမြဲတမ်းပြောင်းရွေ့သွားသည်) ။ ထို့ကြောင့်ဂူဂဲလ်တွင်ပထမဆုံး URL ကိုသင်ရိုက်ထည့်ပါက၎င်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့်အထောက်အထားအဖြစ်ဒုတိယလိပ်စာကိုပေးလိမ့်မည်။ redirection
PHP code အနက်
header () function ကိုခေါ်ပြီးနောက် PHP code ကို the ည့်သည်သည် redirection တွင်ဖော်ပြထားသောလိပ်စာသို့သွားပြီးလျှင်ပင် server မှအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလိမ့်မည်။ ဆာဗာကိုအချည်းနှီးမဖြစ်စေရန် function exit () ၏ function header () ကိုလိုက်နာပါ။
<? php header ('Status: 301 အမြဲတမ်းရွေ့လျားနေတယ်'၊ false၊ 301); header ('တည်နေရာ: လိပ်စာ'); ထွက်ပေါက် (); ?>
သင်သည်သံပုရာပူနွေးသောရေကိုစားသည့်အခါမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း - SANTE PLUS MAG
သင်၏မျက်ခုံးပုံစံကိုပေးပါ။ သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို SANTE PLUS MAG ဟုပြောပြပါမည်